एमसीसी चर्चा चलिरहेकै बेला विमलेन्द्र निधि सुटुक्क किन पुगे भारत ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसी चर्चा चलिरहेकै बेला विमलेन्द्र निधि सुटुक्क किन पुगे भारत ?
नेपालमा एमसीसीको चर्चा चलिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेपाल काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । निधिको निजी सचिवालयले उनी भारतको गएको पुष्टि गरेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट एन्टोनी ब्लीन्केनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई नेताबीच नेपाल र अमेरिकाबीचको समान चासोका विषय, कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा सहकार्य तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
ब्लीन्केनले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गर्नु पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।